Ogaden News Agency (ONA) – Guddiga jaaliyada S.Ogadenia ee dalka Sweden oo shirk ku qabtay magaalada Flen
Posted by ONA Admin	/ May 12, 2013
Shir si heersare loo soo agaasimay ayaa shalay oo Sabti ahay tariikhduna ahayd 11ka May – 2013 lagu qabtay magaalada Flen ee dalka Sweden. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen guddiga Jaaliyada guud ee wadanka Sweden & faraca Jaaliyada magalada Flen ayaa wuxuu biloowday abarihii salaadii duhur kadib waxaana shirka lagu furay sida cadada ahaydba ayaado quraan ah, kadibna waxaa loo istaagay Heesta Calanka Ogadenia. Intaas kadib waxa la guda galay qodobadii shirka oo diirada lagu saaray arimaha dhaqaalaha, arimaha Bulshada, ku baahinta jaaliyada gobalada dhiman ee ayna Jaaliyadu farac ku yeelanin weli iyo iwm.
Qorshe sanadeedkii ay Jaaliyada guud qaadatay bilowgii sanadkan ayaa waxaa ka mid ahaa in Gudiga sare ee Jaaliyada guud bishiiba hal farac oo Jaaliyada ka tisran gobalkeeda ugu tagto, diiradana lagu saaro arrimaha dhaqaalaha iyo guud ahaan wacyi galinta faraca magalada marti galinaysa shirka.
Waxaa sidoo kale shirkan maanta lagaga dooday in Jaaliyada Sweden ay dardar galiso arimaha fanka iyo dhaqanka Somalida Ogadenia waxaana gudiga jaaliyada u qaabilsan arimaha fanka ay balan qadeen inay soo saarayaan fan iyo suugaan halganka wax tar u leh.
Waxaa sidoo kale faraca magaalada Flen iyo gobolada u dhowba ay Guddiga Jaaliyada kula xisabtameen wax qabadkoodii 6dii bilood ee ugu danbeeystay.
Gababadii shirkan ayaa ku dhamaaday is afgarad iyo in jaaliyadu balan qaaday si wada jir ah inay u wada shaqaynayaan guud ahaan gudiga jaliyada iyo faracyada ka jira wadanka Sweden.